अभियानको तात्विक सार : जनसम्बन्ध बिस्तार र सुदृढिकरण::Nepali News Portal from Nepal
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बागलुङले पार्टि केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्लाका सबै तहमा एकता सुदृढिकरण तथा जनसम्बन्ध बिस्तार अभियान चलाईरहेको छ । बिश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखा परेको (कोभीड १९) कोरोना भाईरसबिरुद्ध सदरमुकाम बागलुङ बजारमा माक्स र प्रचार सामग्री बाँडेर अभियानको सुरु भएको हो । अभियानअन्तर्गत यतीबेला जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बैठक, भेला र छलफलका कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतका निकायले भीडभाड हुने क्रियाकलाप नगर्न गरेको आग्रह इतर जिल्लामा चलिरहेको अभियान, यसको औचित्य, नेकपाको एकिकरण प्रकृयामा देखापरेका जटिलता लगायतको बिषयमा ढोरपाटन दैनिकले संवादमार्फत खोतल्ने प्रयास ग¥यो । एकताको तीन महिनाभित्रै तल्लो तहसम्म एकिकरणको प्रकृया सक्ने भनेको नेकपाले दुई बर्ष बितिसक्दा समेत वडा तथा टोल तहमा टुंगो लगाउन नसकेको एकताको बिषय र कोरोना भाईरसबारे नेकपाले चलाईरहेको सचेतना अभियानबारे जिज्ञासा राखेका छौं । प्रस्तुत छ ढोरपाटन दैनिकका लागि सहकर्मी तारानाथ आचार्यले नेकपा बागलुङका सचिव ज्ञामनाथ गैरेसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
तपाईंको पार्टीले चलाएको अभियानको औचित्य के हो ?
–हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसारकै अभियान हो यो । पार्टीको एकता भएको लामो समय भैसक्यो, यो बिचमा हामी जनताको बिचमा महत्वपूर्ण हिसाबले जान सकेका थिएनौं । यो अभियानमार्फत जनताको दैलोमा पुग्नु र हाम्रो पार्टिको धारणा र सम्बन्ध सुधार गर्नु नै यो अभियानको महत्वपूर्ण पाटो हो । यो बिचमा आएको कोरोना भाईरसको बिषयमा सचेतना पु¥याउने दायित्व हाम्रो अभियानमा थपिएको छ । एक हिसाबले हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग मिलेर सचेतना सामग्रीहरु तयार पार्ने र जनताको घरदैलोमा पु¥याउने अभियानलाई पनि जोडेका छौं । जनताको स्वास्थ्य र सरोकारका बिषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर लाग्यौं र खासगरी यो अभियान सुरु भएको छ । यो अभियान र भाईरसको सम्बन्ध एउटा संयोग मात्रै हो । आईहाल्यो यसलाई जोडेर जनतालाई सचेत बनाउने हिसाबले हामी लागेका छौं । अभियानको तात्विक सार जनसम्बन्ध बिस्तार र सुदृढिकरण नै हो ।
सरकारले भीडभाड नगर्नु भनिरहेका बेला भेला बैठकसहितको अभियान किन ?
–खास गरेर यो हाम्रो पार्टिको केन्द्रिय कमिटिको निर्णय हो । हामीले यो अभियान तीन महिना भनेका छौं । पहिलो चरणमा सामान्यतया पार्टिका बैठक र छलफलहरु हुन्छन् । आन्तरिक रुपमा छलफल गर्ने बिषय मात्रै हाम्रो कार्यक्रम पहिलो चरणमा छ । पार्टिको पालिका तहदेखि टोल तहसम्म बनेका कमिटिहरुको आन्तरिक बैठक बस्ने र योजना बनाउने काम मात्रै पहिलो चरणमा हुन्छ । विशेष गरेर दुई पार्टीको एकिकरण भएपछिको पार्टीको सदस्यता एकिकरण गर्ने कार्यक्रम पनि हाम्रो छ । यो चैतको अन्तसम्म पार्टीको सदस्यता एकिकरणको काम सकिन्छ ।
यो त धेरै पहिला हुनुपर्ने काम हैन र ! अझै एकिकरण कति लामो हुन्छ ?
–हो । खास गरेर यो बिचमा हाम्रा अरु कार्यक्रमहरु भए । जनताको बिचमा अरु कार्यक्रम लिएर हामी गयौं । त्यसकारण एकिकरणका कतिपय सकिनुपर्ने कामहरु रोकीएका थिए । अब ढिला हुँदैन् । कयौं अभियान चलेका छन् । बैठक, सेमिनार, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रम भएकै छन् । पार्टि केन्द्रबाट सबै एकिकरणका कामहरु भैरहेका छन् । जनसंगठन, मोर्चा, बिभाग लगायतका सबै संगठनका कामहरु पार्टि केन्द्रले गरिरहेको छ । पार्टिले धेरैकाम सकाएर, टुंगाएर तल पठाएको छ । तल आउँदा कस्तो देखिन्छ भन्दा हाम्रो तीनवटा तहमा कतिपय समस्याहरु हुँदा थोरै ढिलो भएको छ ।
मन कहिले मिल्छ ? पुर्व माओवादी, पूर्व एमाले कहिलेसम्म भनिरहने ?
–मन नमिलिकन त एकिकरण भएकै छैन् । मन मिलेर हामी यहाँसम्म आयौं । नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिको ईतिहाँसमा टुटफुटको विरासत थियो । हामीले त्यसलाई भत्काएर यहाँसम्म आयौं । यो काम निकै जटिल काम हो । एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने कुरा अफ्ठेरो कुरा हो । जटिल अवस्थामा पनि भैरहेका कामहरु धेरै सफल कामहरु हुन् । हिजो एकतामै शंका थियो । आज एक भयो । अब टुंगोमा पुग्ने कुरामा कुनै शंका रहेन । बिरोधीले दिवा सपना देखेका छन् । तर उनीहरुको सपना पुरा हुँदैन् । नेकपाको एकता अन्तिम टुंगोमा पुगेको छ ।
अभियानमा कोरोना बिरुद्धको सचेतना जोड्नुभएको छ । पर्चा मात्रै बाँढ्नुहुन्छ कि जनताले माक्स पनि पाउँछन् ?
–हामी सधैं जनताको पक्षमा छौं । जनताको पिरमर्का बुझ्छौं । जनताको घरदैलोमा पुग्छौं । उहाँहरुलाई सचेत बनाउने दायित्व हाम्रो हो । यस बिचमा हामीले कोरोना बिरुद्धको सचेतना सन्देश बाँडेर नै अभियानको सुरुवात गरेका छौं । सम्भव भएसम्म जनताका समस्या सम्बोधन गर्न पार्टि लाग्छ । कुनै संघ संस्था वा दातासँग सहकार्य गरेर हामी व्यवस्थापनमा लाग्छौं । मुख्य कुरा जनतामा समस्या छन्, सुन्ने र समाधानको बाटो खोज्ने हाम्रो काम हो । बिषेश परिस्थितीमा हामीले हाम्रो कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने र जनतालाई आफ्ना कुरा राख्ने गर्दै आएका छौं । र यसैले हामीलाई जनतासँग नजिक बनाउँछ । मान्छे सचेत रहने कुरा ठुलो हो । त्यसैले सामग्रीभन्दा चेतनालाई जोड दिईरहेका छौं । बजारमा समान अभाव हुने अवस्था, संकटकाल घोषणासम्म गर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि हामीले तयारी थाल्ने र सचेत रहने तथा सरकार र सरोकारवालालाई जिम्मेबार बनाउने पाटोमा छौं । छलफल र तयारी भैरहेका छन् । जिम्मेबारपूर्वक यो समस्यासँग जुध्नुपर्छ ।
हजुरलाई के लाग्छ पार्टी प्रधान हो वा सरकार ?
–पछिल्लो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार त्यो पनि तिनै तहमा । यसमा हामीले भनेको सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिले गर्नुपर्छ र पार्टिको योजना र कार्यक्रमहरु अनुसार सरकार चल्नुपर्छ भन्ने हो । सैद्धान्तिक कुरा हो यो । तर, व्यवहारिक रुपमा सरकारको काम थप हुन्छन् । सरकारका काममा सघाउने, नीति र बिधिमा सघाउने पार्टि हो । तर के कुरा खास हो भने पार्टी स्थायी हो तर सरकार अस्थायी मात्रै हो । हिजो निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका बाचा पुरा गर्ने सरकारले हो । जनताका बिचमा गएर प्रतिबद्धता पार्टिले गरेको हो । त्यसैले पार्टिबाट सरकारमा जाँदा पार्टिका योजना, कार्यक्रम भुल्न मिल्दैन । व्यवहारिक रुपमा सरकारका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु फरक कुरा हो । सरकारभन्दा माथि पार्टि हुन्छ नै ।
स्थानीय सरकारले पार्टीको प्रतिवद्धता पुरा गर्नेखालका काम गरेका छन् त ?
–स्थानीय सरकार नेपालमा नयाँ सरकार हो र नयाँ अभ्यास पनि हो । अब स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सरकार पनि हो । स्थानीय सरकार जनताका प्रत्यक्ष सवालसँग जोडिएकाले धेरै आशाहरु छन् । छोटो समयमा ती आशाहरु पुरा गर्नसक्ने कुरा पनि भएन । अनेकौं चुनौतीका बाबजुद जनताका धेरै समस्याहरु स्थानीय सरकारले पुरा गरेका छन् । तीन बर्ष जनताका समस्याको समाधान र आफ्नो व्यवस्थापनमा लागेका स्थानीय सरकार चौथो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छन् । हो, हिजो के भयो भएन भन्ने बिषयमा समिक्षा आवश्यक छ तर भैरहेको र अब हुने भनिएका कामका बिषयमा बढि सोचौं । स्थानीय सरकारले अबका योजना बनाउँदा आफ्ना सिमित स्रोत साधनका अलवा पार्टिका योजना पनि समाहित गर्छन् ।
स्थानीय सरकारका कमीकमजोरी सुधार र जनताका सवालमा यहाँहरुले केही भूमिका देखाउनुभयो ?
–हामीले बागलुङको सवालमा यस्ता कार्यक्रम गरेका छौं । जनताले चाहेको जस्तो काम भएको छ छैन भनेर खोजी गर्न जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम चलायौं । हामीसँगै जनप्रतिनिधि साथीहरुलाई राखेर जनताका बिचमा बसेर उहाँहरुका सवाल सुनेका छौं । अरु जनताको बिचमा जानेखालका धेरै कामहरु भएका छन् । छलफल बैठकबाट पनि हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरुलाई जिम्मेबार बनाएका छौं । कतिपय ठाउँमा कमीकमजोरी होलान, पार्टिको पनि ध्यान नपुगेको हुन सक्छ । तर ति सबै सवालहरु बिस्तारै समाधानको बाटोमा जान्छन् । जनताका धेरै ठुला समस्या छैनन् । उहाँहरुले राखेका समस्या जनप्रतिनिधि साथीहरुले सम्बोधन गर्न सक्छन् । पार्टिको पोलिसीअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने छ । सबै तहमा स्थानीय तह दल गठन गरेर सहकार्य र समन्वय गर्ने वातावरण मिलाएका छौं ।
पार्टि केन्द्रको सचिवालयले गरेको निर्णयको बिषयलाई लिएर भएको चर्चालाई के भन्नु हुन्छ ?
–पार्टिमा छलफल हुन्छ चल्छ त्यो स्वभाविक कुरा हो । तर बेला बेलामा त्यसका तरंगहरु सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा आउँछ । यी बिषयहरुलाई पार्टि केन्द्रले नै कसरी टुंगोमा पु¥याउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो । हाम्रो नेतृत्व सक्षम छ । नेताहरुले यी सबै समस्याहरुलाई टुंगोमा पु¥याउनुहुन्छ । सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । तपाईले संकेत गर्नुभएका पार्टि उपाध्यक्ष बामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जानुहुन्छ यसमा कुनै समस्या छैन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टि अध्यक्ष ज्यूले स्वास्थ्यलाभ गरेको केही दिनमा पार्टि मिटिङले समस्या समाधान गर्छ । तल्लो तहमा रहेको कौतुहल्ता मेटिन्छ ठुलो बिषयनै होईन् ।
तपाईंको पार्टिको अभियानको उपलव्धी के होला ?
–अब सबै वडामा भेला बैठक हुन्छन् । पार्टिका एकिकरणका काम सकिन्छन् । पार्टि केन्द्रको निर्णय र निर्देशनका आधारमा नै हामीले काम गरिरहेका छौं । हाम्रो पार्टिलाई तल्लो स्तरमा लाने र पार्टिलाई मजबुद बनाउने हिसाबले हामी लागेका छौं । पार्टि मजबुद भएमा मात्रै बिकास, समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले जनतालाई दिने र लिने वातावरण बनाउनकै लागि अभियान हो । कोरोनाबाट सबै सचेत बनौं ।